Jordania Andrefana - Wikipedia
Saritanin'i Jordania Andrefana
Ny Jôrdania Andrefana (amin'ny teny arabo الضفة الغربية‎ aḍ-Ḍaffah l-Ġarbiyyah, hebreo: הגדה המערבית‎, HaGadah HaMa'aravit), dia faritra iray ao Azia andrefana izay manana velarantany 5 860 km² ary miisa 2,51 tapitrisa mponina (2010). Jerosalema Atsinanana no renivohiny.
I Jôrdania Andrefana, izay ataon'ny Fanjakan'i Israely hoe Jodea-Samaria dia fari-tany voafaritry ny tsipika nampitsaharana ny Ady israelô-arabo (1948-1949) ao avaratra sy ao andrefana ary ao atsimo, ary voafaritry ny ony Jordana sy ny Ranomasina Maty ao atsinanana izay sisin-tanin'i Jôrdania koa.
I Jôrdania Andrefana dia ahitana ny tanànan' i Jerosalema Atsinana, i Jerikô, i Nablosa, i Hebrôna, i Jenina ary i Tulkarem. Ao koa dia ahitana toerana masina ho an' ireo fivavahana abrahamika telo (jodaisma, kristianisma, finoana silamo), dia i Ariel, i Ma'aleh Adumim, i Betar Illit ary i Gush Etzion.
I Jôrdania Andrefana dia namoahan' ny Firenena Mikambana fehin-kevitra ka isan' izany ilay laharana faha-181 sy ilay faha-242. Taorian' ny Fifanarahana tao Oslo sy ny Fifanarahana vonjimaika momba an' i Jôrdania Andrefana sy i Kita Gaza dia ampahany iray ihany no niandraiketan' i Israely, dia ny faritra C, fa ny faritra B dia niandraiketan' i Israely sy ny Fahefana palestiniana miaraka, ny faritra A dia tantanan' ny Palestiniana. Ny Fahefana palestiniana dia nitaky ny hampiditra azy ao amin' ny Fanjakan' i Palestina. I Israely dia mihevitra azy ho toy ny fari-tany iadiana, nefa ny sasany amin' ireo firenana ao amin' ny Fiarahamonina iraisam-pirenena dia mihevitra azy ho fari-tany misy mibodo.
Teo ambany fitantantanan' ny Britanika i Jôrdania Andrefana nanomboka tamin' ny taona 1923 ka nisy ampahany amin' io faritra io neritreretina ho lasa Fanjakana arabo ao amin' ny lamim-pizaràna an' i Pelestina izay tapaka tamin' ny taona 1947 tao amin' ny Fivoriamben' ny Firenena Mikambana, ka i Jerosalema-Atsinanana sy ny manodidina azy dia tokony ho eo ambany fanarahamason' ny firenenana maromaro. Taorian' ny Ady israeliana sy arabo tamin' ny taona 1948 dia nobodoin' i Transjôrdania sady nataony ho isan' ny faritra miankina aminy izy tamin' ny taona 1949. Izany fampiakinana azy izany dia tsy neken' ny Fiarahamonina iraisam-pirenena (afa-tsy ny Fanjakana Mitambatra sy i Iràka ary i Pakistàna) sy ny Fikambanan' ny Firenena Arabo, izay nandrahona ny handroaka ny emirata. Taorian' ny Ady Enina Andro dia nibodo an' i Jôrdania Andrefana i Israely. Hatramin' io fotoana io dia afaka nampanorim-ponenana mpijirika tao i Israely. Tamin' ny taona 1980 dia nalain' i Israely hiakina aminy i Jerosalema-Atsinanana ary nataony ho renivohiny i "Jerosalema tafakambana". Tamin' ny taona 1988 dia nanambara ny fahaterahan' ny Fanjakana Palestiniana ao Jôrdania Andrefana sy ao Gaza ny Fikambanam-Panafahana an' i Palestina (arabo: منظمة التحرير الفلسطينية / Munadhamat al-Tahrir al-Filastiniyah) ka i Jerosalema-Atsinanana no nataony renivohiny. Teo anelanelan' ny taona 1990 sy 2001 dia nisy ny fifampiraharahana momba ny sata sy ny fitsinjaràna io fari-tany io teo amin' ny Fahefana palestiniana sy i Israely nefa tsy nahitam-bokany izany. Hatramin' ny taona 2002, taorian' ny fanafihana-vonotena notanterahin' ny Palestiniana izay nahafatesana Israeliana olon-tsotra miisa 700 dia nanaorina manda fanasarahana tao amin' ny taniny i Israely ka entiny "hiadiana amin' ny fidiran' ny mpanao asa fampihorohoroana palestiniana" izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordania_Andrefana&oldid=1038456"
Voaova farany tamin'ny 5 Oktobra 2021 amin'ny 10:59 ity pejy ity.